Iseluleko sengqondo: indlela yokugwema ukungqubuzana phakathi kwabazali nezingane
Izingxabano zilindele kithi zonke izinyathelo, ngisho nasemndenini ongcono kakhulu, ezinye zingenakugwema. Lokhu kuholela esiphethweni sokuthi akudingeki sifunde indlela yokugwema izingxabano kuphela, kodwa futhi ukuxazulula. Lokhu kuzokusiza ukunciphisa ingozi yabo futhi nokuxazulula ubunzima obuhlangane nabo. Yini izazi zengqondo ezilulekayo, ukuthi zingakugwema kanjani ukungqubuzana phakathi kwabazali nezingane? Mhlawumbe, imindeni ivela kaningi, ngoba isikhala esiseduze kuleli qembu lezenhlalakahle sincane kunazo zonke ezinye. Isihloko sendaba yethu: "Iseluleko sezengqondo: kanjani ukugwema ukuxabana phakathi kwabazali nezingane".
Iseluleko sengqondo: Indlela yokugwema ukuxabana phakathi kwabazali nezingane kuxhomeke kakhulu ekucansini komntwana wakho. Kuyinto ejabulisayo ukuthi ukuphikisana namadodakazi kuvela kaningi kunamadodana, ngenxa yokuthi indodakazi idinga ukuxhumana isikhala esiseduze kunokuba yindodana yakhe. Kulokhu sibona ukuthi ukungqubuzana nemvelo yabo akuveli ekuthi amalungu omndeni akude kakhulu komunye nomunye, kodwa, ngokuphambene nalokho, ngokusebenzisana kwabo eduze. Ngakho-ke, uma unenkinga - ungesabi noma uzibeke icala, kuyinto evamile ejwayelekile ukuthi wonke umuntu abhekene nazo. Ukuze ugweme ukungqubuzana phakathi kwabazali nezingane, kubalulekile ukuqonda okushiwo yilo mqondo, izizathu zokuthi kwenzeke, bese ucabangela izindlela zokuzixazulula.
Izingxabano ziqala kanjani? Okokuqala, futhi ngaphezu kwakho konke, lo umehluko wesithakazelo. Ngesikhathi esifanayo, ukwaneliseka kwesifiso sohlangothi olulodwa kuphambene nezithakazelo komunye, ngamanye amazwi, ngesikhathi esifanayo lezi zifiso azikwazi ukugcwaliseka, futhi isimo sivela "noma ... noma", lapho kudingeka khona ukukhetha okunye okuthandayo kanye nezifiso.
Kulesi simo, kunezindlela ezimbili ezingalungile nezodwa zokuxazulula. Ngeshwa, abazali abaningi bakhetha indlela engalungile yokuxazulula impikiswano, okwenza ezinye izinkinga zokubunjwa komlingiswa nokukhuliswa.
Cabangela izindlela zokuxazulula iphethini ethile yokulwa. Isibonelo, izivakashi kufanele zize emndenini, futhi umama kufanele athethelele indodakazi yakhe ekamelweni lakhe, lapho ephendula ukuthi okwamanje kudingeka aqede uhlelo okumelwe axoshe kumunye wezivakashi zakhe, uthi, umzala wakhe, athembisa isikhathi sokugcina. Kukhona isimo sokuphikisana, lapho ngamunye ngamunye kudingeka afeze isifiso sakhe, futhi ngamunye wabo kufanele agcwaliseke ngesikhathi esisodwa.
Indlela yokuqala engalungile yokuxazulula impikiswano, lapho umzali ephumelela khona. Umama uyala indodakazi yakhe ukuba ilahle ibhizinisi elingapheli futhi ngokushesha yenza lokho akushilo. Le ndlela ithatha umyalo nokuhlukunyezwa, kuphela kudala ukungqubuzana. Okokuqala, ingane ifunda ngokugcwala ukugcwala isifiso sayo kuphela futhi igxilise izifiso zabanye, ezokwenza konke ukuphila kwakhe. Okwesibili, sinobubi obuyimfihlo wengane, ubuhlobo phakathi kwakhe nomzali buyahamba futhi buya phansi. Uma usebenzisa le ndlela kumntombazane kusukela ebuntwaneni, uzokhula noma abe nobudlova, noma, ngokuphambene nalokho, futhi ahlukumeze.
Enye indlela engeyona eyakhayo inzuzo yengane. Uma umnika ukunqoba okuqhubekayo empikiswaneni futhi uzinikele kuye ukuze "uzenzele yena", "ingane" iveza ubugovu, ukungakwazi ukuzihlela, ukuxazulula izingxabano kwezinye izimo, ngaphandle komndeni. Sibona ukuthi kuzo zonke izindlela ezingakheki zokuxazulula impikiswano, ingane iqoqa izici ezithile ezingalungile futhi ifaka ngendlela engafanele umlingiswa wayo, futhi esikhathini esizayo uzophinde axazulule izingxabano ngokungalungile.
Indlela eqinisile iyoba yinkinga eyodwa, ukuphumelela kokubili. Kulesi simo, izindlela zokucabangela zokulalela ngokugcwele, "I-imiyalezo" kanye nozwela zisetshenziswa, njengokuhawukela, ukuqonda omunye umuntu nokuzibeka endaweni yakhe. Uma kwenzeka ukungqubuzana, lalela isifiso somunye, cabanga ngokuxazulula impikiswano, eholwa ukuthi izifiso zombili zihlangene. Ukuze kuxazululwe ukungqubuzana ngosizo lokungcebeleka, kubalulekile ukuthi kudingeke ukuthi uhlole ngokucacile isimo shlangothi zombili. Khona-ke, ngosizo lozwela, ukuqagela izifiso zombili amaqembu, leso sinqumo siyoba ngcono kangcono ngamunye. Isinyathelo sesithathu sizobe siqhathanise izifiso zombili futhi sithole izixazululo eziningana zenkinga - nokunye, kungcono. Emva kwalokhu, ngamunye wezinhlangothi ukhetha indlela eyamukelekayo yokuxazulula izingxabano.
Kule ndaba, bobabili umzali nengane bahlala bephumelele, impikiswano ixazululwa, futhi, ngamunye ngamunye ufunda ukuxazulula izingxabano ngaphandle komndeni.
Kodwa kunezinye izimbangela zokungqubuzana emndenini. Isibonelo, ukungaqondani komunye, ukungena kwamanye amazwe ngokweqile, izidingo eziphezulu ohlangothini olulodwa noma olunye, ukuphulwa kwesikhala somuntu siqu, ukwesaba ukuthi izintshisekelo zenye yezinhlangothi ziphulwa noma kungenzeka ukuthi ukwanelisa esinye sezifiso kuvinjelwe. Izingxabano nje zivela ekungakwazi ukuxhumana okulula, ukuthukuthela ngokweqile komuntu oyedwa, ukungakwazi ukuveza isifiso sakhe bese ukuchazela komunye.
Ukuba esesimweni somlaleli - ungaphazamisi omunye, gxila kulo, ungayinikezi ukuhlolwa kwengane, ungamgxeka ngesikhathi yengxoxo, njengezinqumo zakhe. Unganiki iseluleko, yibekezelela. Ungasebenzisa izinqubo ezahlukene zokuqondisa izici zengqondo ukuze uvumele ingane iqonde ukuthi uyayilalela ngokujulile. Ngenxa yalokhu, kuhlanganisa ukukhulumisana okungekho amazwi, isenzo nesimo sokubukeka. Uma ngabe umlaleli nguwe, ke ungamangaleli ingane, ukhulume ngokuthula, hhayi ngamathoni aphakanyisiwe, uchaza ngokuningiliziwe isikhundla sakho nezifiso zakho, ucabange nesifiso somntwana. Mbonise ukuthi uyamqonda, futhi ungazivikeli, kodwa ungamcindezeli.
Ngakho-ke, iseluleko somqondo wezengqondo: kanjani ukugwema ukungqubuzana phakathi kwabazali nezingane ukuthi bangubani? Isazi sokusebenza kwengqondo sinxusa ukuba singagcini isipiliyoni nesimo esibi samalungu omndeni. Uma ungekho emoyeni, zama ukubhekana nezinkinga zakho ngokwakho, hhayi ngezindleko zomntanakho noma umzali, ngokukhiqiza izimo ezingqubuzana ngale ndlela. Uma ungumzali, qaphela ukuthi ungamhlazisi ingane, ukubandlulula, ungamqondi futhi umlimaze ngezwi. Ukuhlaselwa kwezimo ezinjalo ngeke kuholele ekuxabaneni kuphela, kodwa futhi kuyonakalisa kakhulu ubuhlobo bakho.
Kunoma yikuphi, wamukele ingane yakho njengoba ekhona, memeze ukuthi ufuna kuphela okungcono kakhulu, futhi futhi, umthande, wamukele izifiso zakhe nesikhundla, ufunde ukuxhumana, ngakho uzofunda ndawonye hhayi nje kuphela ukuba unqume , kodwa futhi ugweme ukuxabana.
Carnitas nge pico de halo
I-garlic sauce ye-shawarma
I-Cappacci ene-strawberry ice cream ne-ukhilimu
Ngabe owesifazane ulungele nini ukuba nomntwana?
Kungani ngempela sifuna noma asifuni ukushada?
Namathisela ushizi-ithanga lomshukela